Kitra: tsy hilalao intsony ao Afrika Atsimo i Dax | NewsMada
Kitra: tsy hilalao intsony ao Afrika Atsimo i Dax
Tapitra hatreo ny ho filalaovan’Andriamirado Arohasina (Dax) baolina kitra atsy Afrika Atsimo. Nofaranan’ny Black Leopard FC mantsy ny fifanarahana, amin’ity mpilalao Malagasy ity.
Tsy hilalao intsony atsy Afrika Atsimo Andriamirado Arohasina (Dax), eo amin’ny taranja baolina kitra. Fantatra mantsy fa tsy hanavao intsony ny fifanarahana amin’ity mpilalao malagasy ity ny Black Leopard FC, misy azy amin’izao fotoana izao. Natao tao anaty firahalahiana izany fisarahan’ny roa tonta izany.
Raha tsiahivina, ny taona 2018 i Dax no nifindra tatsy Afrika Atsimo ka nanatevina ny Kaizer Chiefs. Nanana olana anefa izy tamin’io fandehanany tao amin’io klioba io, noho ny resaka taratasy. Nitory azy ny Fosa Jr, ekipa nilalaovany teto Madagasikara, ka voasazin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) handoa onitra ny tovolahy.
Herintaona ihany ny nilalaovan’i Dax tao amin’ny Kaizer Chiefs. Lalao 14 ny vitany tao amin’io klioba io, nampidirany baolina roa. Nikisaka tao amin’ny Black Leopard FC izy, ny faramparan’ny taona 2018. Nisy indray ny sazy nanenjehan’ny Fifa azy, tohin’ilay nilalaovany tao amin’ny Kaizer Chiefs. Tsy afaka niakatra kianja nandritra ny efa-bolana izy, tamin’io.
Vokatr’izay rehetra izay, intelo ihany i Dax ny hany mba niakatra kianja niaraka tamin’ny Black Leopard FC. Ankehitriny, tonga ny tsontsori-mamba hisarahana eo aminy sy ny baolina kitra afrikanina tatsimo.
Araka ny vaovao voaray, mety ho any Frantsa ny lehilahy ka hilalao ao amin’ny FC Fleury 91, misy an’i Zotsara sy i Bakary Mario, mpiara-milalao taminy tao amin’ny Fosa Jr ary i William Gros. Misy ihany koa anefa ekipa D3 any Frantsa ihany efa mitady azy. Ankoatra izay, misy klioba D1 any Luxembourg manam-paniriana ny haka azy. Andrasana indray izany izay tena hilalaovan’i Dax ho an’ny taom-pilalaovana manaraka. Andriamirado Arohasina, izay 30 taona, ankehitriny.